Namoaka ny bokin’i Nikola Grueski, praiminisitra teo aloha, ny trano nanonta ny ‘Mein Kampf’ an’i Hitler ho amin’ny teny makedoniana · Global Voices teny Malagasy
Nitondra an'i Makedonia Avaratra i Gruveski tanelanelan'ny taona 2006 sy 2017
Voadika ny 15 Jona 2019 5:31 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, Español, Français, русский, Italiano, English
Ny trano hevan'i Gjurgja ao amin'ny Foaran'ny Boky ao Skopje 2019, mampiseho ireo boky farany navoakany, ao anatin'izany ny bokin'i Gruevski (ambony havia) sy Hitler (afovoany). Saripikan'i Meta.mk News Agency, CC-BY.
Ity tantara ity dia niseho voalohany tao amin'ny Meta.mk News Agency, tetikasan'ny Metamorphosis Foundation. Misy dikan-teny nasiam-panovana navoaka etsy ambany izay anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Niteraka adihevitra tao amin'ny Foaran'ny Boky Skopje tamin'ny 8 May 2019 ilay mpamoaka boky iray avy any avaratr'i Makedonia izay fantatra amin'ny fanontàna boky momba ny Nazi, noho ny famoahana boky nosoratan'ny praiminisitra teo aloha sady mpandositra fitsarana – Nikola Gruevski.
Nanonta tamin'ny dikanteny Makedoniana ny boky “Mein Kampf” sy “Ny Rindrako Vaovao” an'i Adolf Hitler, ary koa ireo angom-bokiny sy ny lahatenin'i Benito Mussolini tamin'ny lohateny toy ny hoe “Ny fanontaniana Jiosy, ny Firazanana ary ny Kristianisma”, na “Revolisiona Fasista” ny trano famoaham-boky Gjurgja.
Sangan'asa matetika manandratra ny fandripahana vondron'olona arakaraka ny foko, fivavahana ary toetra hafa ireo boky ireo. Heloka bevava any Makedonia avaratra sy any amin'ny firenena maro any Eorôpa ny kabarim-pankahalana.
Nikola Gruevski no nitarika ny governemanta elatra-havanana mpanao didy jadona nitondra an'i Makedonia Avaratra teo anelanelan'ny taona 2006 sy 2017, vanim-potoana nijotsoan'ny demaokrasia sy fahasimban'ny andrim-panjakana. Tamin'izany fotoana izany niparitaka be ny fanentanam-panjakana nidera azy ho toy ny mana-pahaizana ara-toekarena. Voafidy solombavambahoaka indray izy tamin'ny taona 2016, saingy nametra-pialàna amin'ny maha filohan'ny antoko rehefa tsy nahazo ny maro an'isa tao amin'ny parlemanta ny VMRO-DPMNE.
Mifototra indrindra amin'ny tohan-keviny (thèse) ahazoana ny diplaoma doktorà ny boky vaovao an'i Gruevski mitondra ny lohateny, raha adika, hoe “Zava-Niainana ijerena ny ho avy – ny fiantraika ara-toekarena amin'ireo karazam-pifanakalozam-bola iraisam-pirenana manerantany, ao anatin'izany ny fijerena manokana ny Repoblikan'i Makedonia”.
Nahazo ny Ph.D momba ny toekarena avy amin'ny Oniversiten'i Sts. Cyril sy Methodius tany Skopje izy tamin'ny Jona 2018- herinandro vitsivitsy taorian'ny nanamelohana azy roa taona an-tranomaizina noho ny fividianana tsy ara-dalàna Mercedes tamin'ny vidiny 600.000 euros fony izy mbola praiminisitra. Tamin'ny volana Novambra 2018, nandositra tany Hongria izy, ary nomena fialokalofana politika
Ny boky “Zava-niainana ijerena ny hoavy …,” nosoratan'i Nikola Gruevski, nafangaro eo anelanelan'ny dikantenin'ny “Ny taonan'ny tsy fananan-tsiny” nosoratan'i Edith Wharton sy “Ny Psykôpatôlôjian'ny fiainana andavanandro” nosoratan'i Sigmund Freud ao amin'ny Foaran'ny Boky 2019. Sary avy amin'i Meta.mk News Agency, CC-BY.
Nanambara matetika i Gruevski fa miatrika fanenjehana ara-politika izy ary nandositra mba hamonjy ny ainy – fanambarana izay averiny ao amin'ny sasin-tenin'ny bokiny.
Araka ny tatitry ny media avy ao amin'ny Foaran'ny Boky, nanambara ny mpamoaka fa nanjary boky be mpividy indrindra ny bokin'i Gruevski ary mikasa hamoaka ny andiany faharoa izy ireo.
Na dia mandositra any ivelany aza i Gruevski, dia toa mbola manampatra ny heriny ao amin'ny antoko politikany VMRO-DPMNE. Mbola mitazona ny anarana filoham-boninahitry ny antoko izy ary voalaza fa efa nahazo fitsidihana matetika avy amin'ireo manampahefana ambony ao amin'ny antoko ao amin'ny trano fialokalofany ao Budapest.
Mety hamoy ny sezany i Gruevski amin'izao fotoana izao satria manonona ny lalàmpanorenana ny depioten'ny governemanta, izay milaza fa ny solombavambahoaka tsy tonga mandritra ny enim-bolana mahery tsy misy fanamarinana ara-dalàna dia mety hajanona amin'ny fe-potoam-piasany. Hotontosaina amin'ny 7 Jiona ny fandatsaham-bato momba izany.
Ao amin'ny Foaran'ny Boky ao Skopje, naseho avy hatrany taorian'ireo andiam-bokin'i Gjurgia izay miaty betsaka ireo taridalana fameloman'aina, tsiaron'ireo olo-malaza mampiady hevitra ary ireo teorian'ny tetidratsy ny bokin'i Gruevski.
Iray amin'ireo famoahana vao nivoaka farany ny andiana kabary sy fanambarana nataon'i Vladimir Potinina antsoina hoe “Teny Manova Izao Tontolo Izao.” Ireto misy sasantsasany amin'ireo boky naseho tao amin'ny trano heva io ihany:
Naseho tao amin'ny trano heva iray tao amin'ny Foaran'ny Boky Skopje 2019 ny endrika Makedoniana amin'ny bokin'i Adolf Hitler “Ny Rindrako Vaovao”, navoakan'i Gjurgja. Mampiseho andalana manangana ady amin'ny Jiosy ny sary. Ny fanazavana amin'ny teny Makedoniana eo ambonin'ny sary dia milaza hoe: “Ohatra amin'ny kabary feno fankahalàna izay nahatonga ny fandripahana faobe– famonoana ny Jiosy, ny Roma sy ny vahoaka Slavy, ary ny famonoana olona maro tao amin'ny mpanohitra ara-politika ny Nazis sy ny Fasista. Ny kabary feno fankahalàna tahaka izany no fototry ny Ady Lehibe Faharoa, ady mihoso-drà indrindra teo amin'ny tantaran'ny olombelona, ​​izay nahatonga ny fahafatesan'ny olona maherin'ny 60 tapitrisa. “Sary sy fanoritsoritana nataon'ny sampam-baovao Meta.mk, CC-BY.
Te-hilaza ireo mpamoaka literatiora fasista manerantany fa mampihatra ny zon'izy ireo amin'ny fahalalahana miteny izy ireo, na koa mamoaka ireo boky ireo ho loharano ara-tantara tsotra fotsiny ho fianarana.
Na dia izany aza, ny fanontana avy any Makedonia avaratra izay notononinay dia tsy ahitana fampahalalana momba ny vokatr'ireo fanambarana naseho ankoatra ireo fialana bala fohy (ary indraindray manjavozavo). Amin'ny fampitàna ny fampielezan-kevitra Nazi amin'ny endriny tany am-piandohana, ary tsy mandray izany toy ny kabary feno fankahalana, sy tsy nahitana fanadihadiana mitsikera sy tantara manodidina azy, dia azo jerena mora foana toy ny fanohanana ny famoahana azy ireny.
Mandritra izany, nanaisotra ny fanasana ilay mpamoaka boky milaza tena ho fasista tamin'ny hetsika ireo mpikarakara ny tsenan'ny boky ao Turin, izay natao tao an-tanànan'i Italia teo anelanelan'ny 9 sy 14 may, rehefa nandrahona hanao ankivy an'izany ireo mpanoratra marobe, anisan'izany ny olona iray sisa velona tamin'ny Fisoronana (Holocaust).